Nin si yaab leh isugu dhiibay booliska kadib markii……… | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Nin si yaab leh isugu dhiibay booliska kadib markii………
Nin si yaab leh isugu dhiibay booliska kadib markii………
Posted by: radio himilo August 8, 2017
Muqdisho – Danbiile ayay ku adkaatay helidda doorasho ka baxsan inuu isku dhiibo booliska waayo wuxuu doonayay in saraakiisha boolisku ay sawirkiisa foosha xun oo ay doonayeen ka saaraan baraha bulshada, marka loo eego booliska UK.
Booliska South Wales ayaa sheegay in Wayne Esmonde uu ku lug lahaa danbiyo iyo rabshado.
Wuxuu ka baxsaday goobta kahor intaysan booliska soo gaarin. Dhawaantan ayay bartooda facebook kusoo daabaceen sawirkiisa iyo inuu baxsad ka yahay xaggooda – shacabkuna ay kusoo war-geliyaan war iyo wacaal wixii ay ka helaan.
Esmonde ayaa facebook kusoo qoray: “Haa waa aniga sawirkan aan sida habboon loo qaadin. Waxaan la hadlay la-taliye, wuxuuna igala talin doona waxa ila gudboon inaan sameeyo. Mahadsanidiin.”
Wuxuu intaas kusii daray: “Waan qiimayn lahaa haddii aad sawirka ka saartaan bartiina facebook.”
Taniyo markii sawirkiisu ku haray baraha bulshada, Esmonde ayaan helin doorasho aan ka ahayn inuu booliska isku dhiibo. Kolkii uu soo galay diiwaanka kuwii la baadi-goobayay, sawirkiisa ayay ka saareen bartooda facebook.
Previous: Dhaqtar bilaash ku dabiiba dhibanayaasha danyarta ah.
Next: Ian Wright: “Arsenal waa inay lasoo saxiixataa Virgil van Dijk.”